Filtrer les éléments par date : samedi, 13 février 2021
samedi, 13 février 2021 19:46
Pilo kely : Kaly tsinjo ho zaraina manerana ny Faritra
Anareo Bobasakoa agny miambiambigny hely fo fa, efa ho avy izy io hoy rasazy.
Samy mandry mihojogno
samedi, 13 février 2021 19:26
Anahidrano : Hanomboka ny fanorenana ny oniversite manara-penitra Philbert Tsiranana
Napetraka androany 13 febroary 2021 ny vato fototry ny asa fanorenana ny oniversite manara-penitra Philbert Tsiranana aty Anahidrano Antsohihy.
Nanotrona izany ireo Solombavambahoaka voafidy tamin'ireo Distrika ao anatin'ny Faritra Sofia, ny Governoram-paritra ary ireo Ben’ny Tànana sy ireo olo-manankaja maro sivily sy miaramila, ireo Sojabe.
Haharitra enim-bolana ny asa fanorenana, ahitana trano fianarana, amphithéâtre, trano famakiam-boky, laboratoara...
samedi, 13 février 2021 19:22
Lozam-pifamoivoizina : Maty tsy tra-drano ilay mpamily Taxi...
Zoma manjombona ny omaly 12 Febroary 2021 raha nahita ny lozam-pifamoivoizina mahatsiravina nitranga teto amin'ny Fokontany Soavinandriana Kaominina ambonivohitra Sambava.
Taxi niampita tampoka rehefa nahita mpandeha kanjo nisy kamiao nandeha mafy ihany koa ka tsy azo nialana ny loza. Voafaoka ny Taxi ary nipitika tao ambany kamiao ilay mpamily, ka maty tsy tra-drano.
Tovolahy mbola erotrerony satria manodidina ny 25 taona ary namela kamboty kely tokony ho 2 taona ilay mpamily.
samedi, 13 février 2021 19:18
13 febroary : Andro maneran-tany ho an'ny RADIO
Nankalazaina androany tetsy amin'ny tokotanin'ny ORTM Anosy ny andro maneran-tany ho an'ny RADIO.
Mankalaza ny faha-folo taona isika eto Madagasikara raha 110 taona kosa no nisian'izany maneran-tany.
Tafiditra ao anatin'ny fialamboly, fanentanana, kolontsaina toy ny hira , dokam-barotra, finoana, ny fanatanjahantena sy ny maro hafa ny fanamarihana ny anjara-toeran'ny onjampeo manerantany.
samedi, 13 février 2021 17:58
Kaly tsinjo sa fanampiana fambolena sy famoronana asa
100ar ny fandraisana anjara amin'ny vidin'ny sakafo kaly tsinjo.
Raha 4% n'ny Malagasy no misitraka azy manerana ny Nosy, satria hoe tsy Antananarivo ihany no omena = 25 000 000 x 4% = 1 000 000 olona
Heverina fa lany anakaramana ireo mpiasa sy kojakoja fanasam-biliha izay 100ar fandraisana anjara izay.
Vola lany amin'ny sakafo, izay ny fanjakana no hiantoka azy 2000ar x 1 000 000 repas/j = 2 000 000 000ar/j x 30j = 60 000 000 000ar/mois (Ny alahady moa tsy ao anatiny fa ny volana misy 30 sy 31, dia tsoritsika ho 30 andro ihany)
Raha 4 volana no ezahina hisian'izay kaly tsinjo izay dia heverina andany 240 000 000 000ariary izany.
Vola lany ambolena vary 1ha hamokatra vary 4tonnes vary akotry = 1 100ar/kg x 4 000kg = 4 400 000ar/ha
Lany kaly tsinjo 240 000 000 000ar (04 volana famokaran'ny vary) mahavita 240 000 000 000ar/4 400 000ar = 55 000ha = 220 000tonnes = 220 000 000kg.
samedi, 13 février 2021 11:00
Tranovaho Beloha : Tratra ireo sokatra 810
Araka ny tatitra nataon'ny Tale rejionaly momba ny ala eto Androy, izay niantso ny Zandary aty an-toerana, dia tamin'ny alakamisy 11 Febroary 2021 lasa teo dia nahazo vaovao avy amin'olona tsara sitrapo ny chef cantonnement n'izy ireo ao Beloha momba trafika sokatra, ka rehefa naheno izany ity farany dia nidina tany Benonoky kaominina ambanivohitra Tranovaho, Distrika Beloha niaraka tamin'ny lehiben'ny Distrika sy ny Ben'ny tanàna tany an-toerana.
Rehefa nahita azy ireo moa ny olon-dratsy dia vaky nilefa ka sokatra 810 no azon'izy ireo tamin'izany.
Efa eo ampelatanan'ny Zandary moa ny raharaha ary manohy ny fikarohana ireo olona nanangona ireo sokatra ireo.
Efa naverina any amin'ny Parc ihany koa ireo sokatra.
Hisy ny fihaonan'ireo tompon'andraikitra amin'ny fiandohan'ny herinandro io andaminana ny fomba fiasa ahafahana miaro ireo harem-pirenena ireo.
samedi, 13 février 2021 10:58
Kaly Tsinjo : Nanomboka ny fitsinjarana
Nanomboka ny zoma 12 febroary 2021 ny fitsinjarana ny Kaly Tsinjo, na fizarana sakafo masaka ho fitsinjovana hatrany ireo olona tena marefo vokatry ny fihibohana noho ny valanaretina Covid-19.
Toerana miisa 60 manerana ireo Boriborintany enina eto Antananarivo Renivohitra no hizarana ny Kaly Tsinjo izay hisokatra isan'andro, ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy.
"Fotoanan'ny firaisan-kina sy ny firaisam-po izao; ary ny fitondram-panjakana dia tsy mitsahatra mitady vahaolana hitsinjovana hatrany ny vahoaka malagasy" hoy ny Filoha Andry Rajoelina.